Tontolon’ny Fitsarana madagasikara - Mpitsara 10 hiakatra filankevi-pifehezana _ La ligne de Mire du 12 décembre 2018 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil Ministre de Justice à Madagascar Harimisa Noro Vololona Tontolon’ny Fitsarana madagasikara – Mpitsara 10 hiakatra filankevi-pifehezana _ La ligne de...
Tontolon’ny Fitsarana madagasikara – Mpitsara 10 hiakatra filankevi-pifehezana _ La ligne de Mire du 12 décembre 2018
Araka ny vaovao mahakasika ny tontolon’ny Fitsarana eto Madagasikara, mpitsara 10 no indray hiatrika ny filankevi-pifehezana eo anivon’ny minisitera mpiahy manomboka anio, 12 desambra 2018.
Raha ny nambaran’ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana tamin’ny alalan’ny minisitra Harimisa Noro Vololona mantsy, noho ny tsy fanajana ny etika sy ny deontôlôjia eo amin’ny tontolon’ny mpitsara no antony goavana hiakaran’ireo mpitsara miisa 10 ireo ny filankevi-pifehezana.
Araka ny fanazavan’ny mpitsara iray, Tiaray Fanahimanana, ao anatin’ny etika sy deontôlôjia avokoa no mirakitra ny fifampifehezana eo amin’ny mpitsara. Noho izany, hoy ity mpitsara sady mpikambana eo anivon’ny Filankevitra ambonin’ny mpitsara ity, ahafahana mampakatra mpitsara amina filankevi-pifehezana ny tsy fanajana ireo izay voarakitra sy voatondron’ny etika sy deontôlôjia, toa ny fitondran-tenan’ny mpitsara, ny fanaovana kolikoly, sns.
Marihina fa mizara ho roa kosa ny filankevi-pifehezana ho an’ny mpitsara. Izany hoe, arakaraka ny fahadisoan’ilay mpitsara no mitondra ny filankevi-pifehezana. Ny minisiteran’ny Fitsarana no mampiantso, ary manatanteraka izany izay mifototra amin’ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Misy ihany koa ny tonga dia mifototra indray amin’ny lalàna famaizana. Izany hoe, miakatra fitsarana mihitsy ny raharaha ary tsaraina, toa ireo nanao fahadisoana rehetra ary enjehin’ny lalàna.
Noho izany, arakaraka ny vesatra hiakaran’ny mpitsara filankevi-pifehezana no sazy mety ho azony. Mety hiafara hatramin’ny fandroahana tsy ho mpitsara intsony kosa ny fanapahan-kevitry ny filankevi-pifehezana. Misy hatrany amin’ny famonjana ihany koa anefa izany, sns.
Ankoatra izay, nambaran’ny minisitra ihany koa fa tsy maintsy hisy ihany koa ny fanoloana ireo tompon’andraikitra sasany eo anivon’ny fandraharahana ny fonja…
Eo ihany koa ny fanafoanana tanteraka ny fifaninanana fidirana amin’ny sekolin’ny mpitsara sy ny mpiraki-draharaha eo anivon’ny Fitsarana. Nambaran’ny minisitra Harimisa Noro Vololona fa hatao ara-informatika avokoa ny mahakasika ny fifaninanana fidirana ho mpianatra amin’ny sekolin’ny mpitsara (ENMG).
A partir de maintenant, Tolérance zéro au niveau de la Justice à Madagascar dit la Ministre de la Justice malgache lors d’une émission du 5 juillet 2018 à la TVM
Article précédentMeurtre des policiers Vingt et un suspects devant le parquet – expressmada du 8 décembre 2018
Article suivantMadagascar, lutte contre la corruption, dix magistrats sur la sellette – L’expressmada du 12 décembre 2018
Raharaha Houcine Arfa Voahitsakitsaka ny hasin’ny fitsarana Malagasy by Kolo TV...
Ministre de la Justice – Charles ANDRIAMISEZA